I-Matane: Ulwandle luza kuwe (CITQ: 302769) - I-Airbnb
I-Matane: Ulwandle luza kuwe (CITQ: 302769)
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAnnie
Inombolo yokusekwa kweCITQ:
302769 Beautiful indlu esemaphandleni engaselunxwemeni loMlambo iSt-Laurent. Ukubona iindawo ezimangalisayo nokufikelela "ngaselwandle" ngqo ngezitepsi ezikhuselekileyo.
Le ndlu inokuhlala abantu abadala abayi-4 okanye abayi-6 ngokukhululekileyo. Ikufuphi kuzo zonke iinkonzo kodwa kungekhona ngeyona ndlela, unezona zigqwesileyo macala onke. Ukuzola nesandi samaza kunye nokufikelela kwiivenkile nakwidolophu yaseMatane kwimizuzu eyi-5 ngemoto.
Ulwandle ngokwakho yindlu entle ekwinqanaba elinye (amanyathelo ayi-3 okufikelela) ekwindawo engaselunxwemeni lweSt-Laurent estuary (apha imalunga nolwandle!!)
Amagumbi okulala ayi-2 kumgangatho osezantsi, igumbi lokulala eliyi-1 kwigumbi elingaphantsi, indawo yokuhlala evulekileyo, imbonakalo kunye nokukhanya kukhethekile.
Senze indlu yethu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yaba yindawo ekhusela indalo. Ukukhetha iindlela ezi-3 (umquba wasekhaya kwiwebhsayithi), iimveliso zokucoca ezilungele indalo, izinto zokucoca ezinokuphinda zisetyenziswe, iitawuli zamaphepha ezinokuhlanjwa, njl. Imihombiso yethu yenziwa ngokukhethekileyo ngezinto ezihlaziyiweyo okanye ezinokuphinda zisetyenziswe. Apha inuka kamnandi elwandle kunye neeoyile ezibalulekileyo...
INDLU ESEMAPHANDLENI ayitshayi tu.
32" HDTV ene-I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Roku
I-Matane-sur-mer isendaweni yokungena esixekweni ukuba uvela entshona. Isitrato esincinci esinezindlu zasemaphandleni ezihamba ngasemlanjeni, eParreon. Imizuzu eyi-5 ukusuka edolophini kunye neevenkile. Imizuzu eyi-30 ukusuka eMétis Gardens, imizuzu eyi-50 ukusuka eRimouski (esona sixeko sikhulu kwiLower St-Laurent).
I-Matane inezinto ezininzi ezenziwayo: iibhayisekile zasezintabeni, ukuloba, ukunyuka intaba, ukuhamba ngebhayisekile, ukukhenketha ngenkcubeko, ukuqubha, ukutyibilika ekhephini kwilizwe njl...
Nangona singekho kwisayithi, siyafumaneka ngefowuni okanye ngomyalezo ngalo lonke ixesha. Ukongezelela, sinomntu kwisiza saseMatane onokukunceda ngazo naziphi na iingxaki.
Inombolo yomthetho: 302769
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Matane